Usuku My Pet » Imfihlo a Kiss Great
Ukuqabulana kumnandi futhi uma kwenziwa right, sparks fly futhi nizongishiya umlingani wakho nezimungulu. Kodwa kanjani uthatha kissing yakho ezingeni elilandelayo? Ngezansi, siye wethule izimfihlo a kiss enkulu.
Ukuzinika isikhathi bakugcone ngaphambi izindebe uvala nokusiza ukwakha ukulangazela. Kungakhathaliseki ukuthi isandla, ukupotoza, noma bezihlikihla imihlane, lokhu Ukuthintana ngokomzimba ngaphambi langempela kiss kuyimfihlo ukuthi kuzosiza ukuqinisa passion ehlanganyelwe kanye ngokujulile uxhumano lwakho.
Secret #2: Nethezeka
Ukuqabulana, ngisho uma uke wamanga kayikhulu, kungaba ngempela nerve Racking. Isihluthulelo siwukuba uphumule. Khumbula ukuphefumula deep, adambise ingqondo yakho, futhi zethembe.
Ingabe izinto ngezindebe zakho ngaphandle kissing. Abancela noma ngobumnene nibbling abalingani bakho izindebe ngokuqinisekile uyobaxosha crazy ubendle ngokocansi. Enye nqubo lip-egxile ukubalekela emlonyeni wakho kancane phezu izindebe zabo. Uma kissing yakho ayifuni pick up, nokushintsha ingcindezi kanye nesivinini of the kisses kusiza ukwakha isasasa njengoba umlingani wakho ngeke ukwazi lokho uyeza ngokulandelayo.
Secret #4: Izindlebe, Nose, Eyes, futhi Neck
Nakuba kissing ngokuvamile wagxila nxazonke sezindebe akuyona indawo nje kufanele sigxile. Kissing abalingani bakho izindlebe, hlola, ekhaleni, nezinkophe bonke asize ukuvula i kiss ezejwayelekile ebangenisa enjabulweni romantic. Uma ufuna ukwandisa it up a notch, zama ngidlala iluma indlebe yabo nentamo. Nokuyidlalisa lezi amabala ethile kwenza emizweni ezintsha nemizwa siyonezela ugqozi futhi umfutho kiss yakho lizotholana phezulu nelinye.
Nakuba izimfihlo ngenhla kungasiza noma ubani ibe kisser enkulu, imfihlo enkulu itholakala wombuso akho angokomzwelo uxhumano umlingani wakho. Ukuze ubone iziqhumane kanti kissing, imiphefumulo yenu kufanele ukhulume nomunye. Ngokuhlanganyela izindaba obuseduze nezinkumbulo, ukwesaba ambitious, nokuvumela imizwelo yakho eqiniso abonisa zonke izindlela ubuhlobo bakho ukuba zifinyelele ezingeni elijulile. Nakuba lokhu entsha, isimo esingokomzwelo siyokulethela abasengozini, lokhu kungesinye ingozi ukuthi kuyoba kunomvuzo.
Kissing kuyindlela enhle yokubonisa umuntu wakho ekhethekile nje kangakanani kuwe. With lezi zimfihlo, lesi senzo obuseduze ungaguqula ubuhlobo bakho kulelo obuqinile ufisa.